လူမဆန်တဲ့သူတွေရဲ့ အပြုအမူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » လူမဆန်တဲ့သူတွေရဲ့ အပြုအမူ
Posted by CharTooLan on Oct 9, 2010 in News | 12 comments
ဆန် တဲ့ မ လူ သူ
Mail ကြည့်ရင်းနဲ့ ညီမလေးကဘာလုပ်ကြတာလဲမေးလို့ “ဥာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ စားကြတာ”
Shocking news circulated in China. A town in Canton is now on trend taking baby herbal soup to increase health and sexual performance/stamina. The cost in China currency apprx $ 4000 (it is about Rs2000) A factory manager was interviewed and he testified that it is effective because he isafrequent customer. It isadelicacy whereby expensive herbs are added to boil the baby with chicken meat for 8 hours boiling/steaming. He pointed to his second wife next to him , who is 19 (he is 62), and testified that they have sex everyday. After waiting foracouple of weeks he took this reporter to the restaurant when he was informed by restaurant Manager that the spare rib soup (local code for baby soup) was now available . This time it wasacouple who have2daughters and this 3rd one was confirmed to beadaughter again. So the couple aborted the baby which was5months old. Those baby close to be born and die naturally costs 2000 in China currency. Those aborted ones costafew hundreds in China Currency. Those couples who did not want to sell dead babies, placentas can be accepted also for couple of hundreds. The reporter making comment that is this the problem arised from Chinese being taking too much attention in health or is the backfire effect when China introduced one child inafamily policy (since majority prefers to have male babies and those poorer families need ended up selling their female babies.)
စားရဲတဲ့ ၊စားရက်တဲ့ သူတွေကို အရမ်း အံ့သြ မိပါတယ်။ မြင်ရတာ ကိုက သနားစရာလေး။ ဘယ်ကနေ ၀ယ်ပြီး ချက်ပေးလဲ မသိဘူး။
ကိုယ့်သန္ဓေသားကိုတောင် ရောင်းစားရဲတဲ့ မိန်းမကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရက်စက်ဆုံးလူသားပဲပေါ့
ဒီလို ရက်စက်တဲ့လူတွေ များလာလေ
ကမ္ဘာကြီးက ပျက်စီးဖို့ နီးလာလေပဲပေါ့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလူတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သန့်အောင်ရှင်းရမယ်လေ
ကမ္ဘာကြီးက ပျက်ရင် ကောင်းတာကော မကောင်းတာကော အကုန်ပါမှာပဲ
သံသရာမကြောက် ငရဲဆိုဂျိုနဲ့လားဆိုတဲ့လူ မျိုးတွေနေမှာပေါ့
ဓာတ်ပုံက အင်ကြီးပါ။ ဟိုးအရင်ကထဲက အင်တာနက်မှာ၊ အီးမေးလ်တွေထဲမှာ ဖြန့်တာတွေ့ဖူပါတယ်။ တရုတ်မှာလိုလို၊ ဂျပန်မှာလိုလို ရေးကြပါတယ်။ ဟုတ်မှတော့ ကမ္ဘာ့သတင်းဌာနကြီးတွေက လက်ပိုက်ကြည့်နေကြပါ့မလား။ အခုခေတ်က မီဒီယာခေတ်ပါ။ ဘာပဲပြောပြော ဖတ်သူအတော်များများကို ဟင်ခနဲ ဖြစ်သွားစေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ဒါမျိုးတွေကိုဖတ်ပြီးယုံနေရင်တော့ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့တိုက်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ နအဖပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း အတွက် အိုင်ဒီယာတခု ရသွားနိုင်ပါတယ်။
မွေးခါစ ကလေးလေး က အဲ့လောက်ပဲရှိတာလား… သေးသေးလေးနော် … အသေလေးကို ချက်တာလား …. အရှင်လေးကို သတ်ပြီးချက်တာလား … အရှင်ကို သတ်ပြီးချက်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုးလ လွယ် ပြီး ဆယ်လဖွါးရယ် … နာကျင်ရတယ် … ပြီးတော့ရောင်းစားတယ် … ကြောက်တယ် …
အာဒါကြီးက Hoax ကြီး၊ လူတွေအထိတ်တလန့် ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သတင်းကြီး ဖတ်မနေနဲ့ အာရုံများတယ်…
ခံယူတတ်ရင်တော့ Photoshop ပညာတွေရနိုင်တယ်
ဒါကြီးက ကြာပါပြီ ။ သေးသေးလေး စားကောင်းမှာလဲမဟုတ်ဘူး။ နာ့ချို ချားဘူး။ရွံ လို့ ချားဘူး။
တကယ်မဟုတ်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံနဲ့ သတင်းတွေကိုတော့ ၀ိုင်းဝန်းပြီး ထိမ်းသိမ်းသင့်ကြပါတယ်..။ ထူးတာတွေထက် ပို၍ ဆန်းရမည် လို့….ဆိုပြီး ရှောက်တင်နေကြရင် စာဖတ်သူတွေကို မလေးစားရာ ရောက်နေပါတယ်..။
ထိုင်ဝမ်မှတရုတ်လူမျိုးများ၊ နောက်တော့ တရုတ်ပြည်မ၊ နောက်ဂျပန်အထိပြောင်းသွားပြီး..လူမျိုးရေးအရတိုက်ခိုက်ဖို့ လုပ်ကြံမှုများသာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။